वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन ४ दिनमै रु. ३१ अर्बले बढ्यो, कर्जा लगानी कति ? Bizshala -
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले चैत महिनाको अन्तिम ४ दिनमै ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चैत २८ गतेदेखि चैत ३१ गतेसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका हुन्। योसँगै बैंकहरुको कुल निक्षेप ३९ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत चैत २७ गतेसम्म बैंकहरुको कुल निक्षेप ३९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
एनबीएकै तथ्यांकअनुसार चैतको अन्तिम ४ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुबाट कुल ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। चैत २८ गतेदेखि चैत ३१ सम्म बैंकहरुले ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका हुन्। योसँगै बैंकहरुको कर्जा लगानी ३५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
गत चैत २७ गतेसम्म बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ३५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
चैत महिनाभरि भने वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब १८ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीच मर्जर सम्झौतामा किन ढिलाइ ?
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र...
कुन बैंकको आधारदर कति ? कुन बैंकबाट पाइन्छ सस्तैमा ऋण ?
काठमाण्डौ । पहिलो लहरको कोरोना महामारीबीच वाणिज्य बैंकको व्यापार...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंक अफ...
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नाफा बढायो, अन्य सूचकमा कस्तो ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म नेपाल...
एनएमबि बैंकको नाफामा उछाल, खराब कर्जा २५.९%ले घट्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म एनएमबि बैंक...
सानिमा बैंकको नाफा बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा रु. १.४ अर्ब
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सानिमा बैंक...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ग्लोबल आईएमई...
मेगा बैंकको नाफा झन्डै रु. २ अर्ब, खराब कर्जामा सुधार
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म मेगा बैंक नेपाल...